IHuizhou Jiahong Industrial Co ,. Ltd.yasekwa ngonyaka ka-2010, ukuba ngoku ibekwe kwisixeko Huizhou kwiphondo Guangdong, indawo yoluntu ligubungela ngaphezu kwama-20,000 square metres, nto leyo professional iimveliso EVA mveliso, wenza uphuhliso ingqokelela, uyilo, imveliso kunye neentengiso njengenye amashishini e-foam e-foam amashishini.
Umzi mveliso wethu ungumnini wemveliso epheleleyo, impahla eluhlaza, igwebu, uhlengahlengiso kumatshini, ukusika, iipuzzle ezinqamlezileyo, itsheki esemgangathweni, ukupakisha, ukupakisha ingxowa ye-PVF, ukupakisha ibhokisi, ukugcina indawo yokugcina, ukulayisha izikhongozeli ... Onke amacandelo ajongwa ngumphathi. ifikelela kwimigangatho echazwe ngurhulumente ukusuka ekukhetheni izinto ukuya kwimveliso, kwaye isebenzise ngokungagungqiyo inkqubo esemgangathweni ye-ISO9001 kunye ne-ISO 14001 inkqubo yokusingqongileyo. Ukuthumela ngaphandle iimveliso 100% yokupasa iingxelo / iziqinisekiso zemveliso njenge-EN71-1, EN71-2, EN71-3, ASTM, REACH, BSCI, ISO9001, GSV, FCCA (yeWal-Mart), FAMA (yeDisney).
Isiqinisekiso seNkampani kunye neziQinisekiso
Ekuqaleni, sasiyifektri encinci ebekwe eDongguan, abantu abancinci abancinci ababenenjongo efanayo bagqiba kwelokuba baqale kancinane, banike yonke imizamo yokwenza izinto ezincinci kakuhle. Akukho lula, kodwa ekugqibeleni umzi-mveliso wethu waba mkhulu kwaye mkhulu, Kwaye safumana abahlobo abangakumbi nangakumbi abanomdla abazimanya nale ntsapho inkulu.
Emva kwayo yonke le minyaka, besilandela umthetho Umgangatho-wokuqala, abathengi kuqala, i-odolo nganye siya kuyilungiselela ngokungqongqo ukuba itshekishwe ngomgangatho ngenkqubo. Njengomzi mveliso oqeqeshiweyo, siyazi kakuhle ukuba ingxelo elungileyo kunye nodumo oluvela kubathengi bethu ziya kusigcina siqhubela phambili.
Into encinci esiyifunayo kukusilela abathengi bethu. Sikugcinile oku engqondweni, kwaye ekugqibeleni, ezinye iimveliso ezaziwayo okanye abathengisi abathembekileyo bazakhela intsebenziswano enzulu nehlala ihleli kunye nathi, njenge-SPIN MASTER, TESCO, ALDI, RAKUTEN njl. inkxaso. Kwaye siyathembisa ukuba siyakugcina ukuvelisa iimveliso ezisemgangathweni ophezulu, kwaye sinikezele ngeenkonzo ezinkulu kubo bonke abathengi bethu abathandekayo. Asiyi kusilela ukuthembela kwakho nenkxaso, pls qhubeka uhamba nathi, sinokholo lokwakha ikamva eliqaqambileyo kunye!
Intshayelelo yeMbali yeNkampani
Senza inkqubela kwaye siqhubeka siphucula
Siye savelisa imigca yemveliso emitsha kunye noomatshini aba-2 begwebu
Sibhiyozele isikhumbuzo se-7th, kufana nokudibana kosapho lonke, ukukhumbula
ukuhleka kunye nobunzima kule minyaka, ukwabelana ngamaxesha amyoli kunye
Wavula iofisi yesebe eGuangzhou, wakha iqela elitsha lokuthengisa
Njengokwandiswa kwesicelo seshishini, umzi-mveliso wethu uye kwisixeko saseHuizhou, indawo enkulu kakhulu yezorhwebo
Sathenga oomatshini abali-8 abagwebu ukuhlangabezana neemfuno zeodolo.
Saqala njengomzi mveliso omncinci kunye neqela elincinci kwisixeko saseDongguan
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, AMP Iselfowuni Umgangatho wePuzzle, Umgangatho wePuzzle wokuzilolonga iMat, Umgangatho wePuzzle wePuzzle, Umgangatho weMat Puzzle, Umgangatho wePuzzle Mat Cushion, Umgangatho wePuzzle yePuzzle, Zonke iiMveliso